Banaanbaxyo rabshado wata oo maalintii 3aad ka socda magaalada Minneapolis gobolka Minesota ee dalka Mareykanka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Banaanbaxyo rabshado wata oo maalintii 3aad ka socda magaalada Minneapolis gobolka Minesota...
Banaanbaxyo rabshado wata oo maalintii 3aad ka socda magaalada Minneapolis gobolka Minesota ee dalka Mareykanka
Banaanbaxyo rabshado wata ayaa maalintii 3aad ka socda magaalada Minneapolis gobolka Minesota ee dalka Maraykanka kuwaasoo looga oo horjeeda dil ay booliska u geysteen nin madow ah oo lagu magacaabo George Floyd.
Ciidamada Ilaalad Qaranka Mareykanka ayaa lagu daabulay magaalada Minneapolis iyagoo loogu baaqay iney soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeyntii magaalada.
Floyd, oo ahaa 46 sano jir ayaa Isniintii geeriyooday waxaana baraha bulshada ku bahaay muuqaal mujinayay isgaoo oronaya ” Ma neefsan karo” waxaana markaasi luqunta jilibka kaga hayay nin cadaan oo boolis ah.
Wuxuu la kulmay boolis fiidnimadi 25-kii bishan Mayka dib markii askarta la wacay oo loo sheegay nin looga shakisan yahay inuu foorjari ama been abuur sameynayo.
Guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa ciidamada ilaalada qaranka ku daabulay Minneapolis kaddib markii ay maayarada codsadeen in ciidamadaasi la keeno iyadoo xaaladda amniga ay faraha ka baxday. Waxa uu sheegay in boobka ay geysanayaan dibadbaxayasha u sababay in ganacsiyo badan khasaaro loo geysto, oo ay ka mid yihiin kuwa ay leeyihiin dadka laga tirada badan yahay.
Duqa Magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa sheegay in qareenka dagmada Hennepin Mike Freeman uu dacwad ku soo oogo sarkaakiishii booliska ahayd ee ku lugta lahaa dhimashadii George Floyd.
Previous articleMaxay Tahay Damaca Nabad iyo Nolol imsay ku Darsan Doonaan
Next articleMadaxda Dowlada ugu sareysa ooaan ka hadlin xasuuqa 8 Dhaliyaro
Ciidamada Xoogga dalka oo qabtay rag ka tirsan Al-Shabaab oo miino...